मुक्तिनाथ जाने होइन ? – rastriyakhabar.com
सिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिर मुस्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथमा पर्दछ । वराह पुराण र हिमवत्खण्ड पुराणले समेत महिमागान गरेको मुक्तिनाथ क्षेत्र हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रविन्दु मानिन्छ । मुक्तिनाथ मन्दिर नेपाली तले शैलीमा निर्मित छ ।
मन्दिर छेउछाउमा १०८ धारा, ज्वाला माई मन्दिर, शिवालय र गुम्बाहरू पनि छन् । कालीगण्डकी नदीको नजिकै पर्ने मुक्तिनाथ मन्दिरको स्थापना मध्यकालताका जुम्लाका राजाले गराएको मानिन्छ । अहिलेको मन्दिर भने वि सं १८७१ सालमा शाहराजाहरूले गराएका हुन् ।
मुक्तिनाथ मन्दिरमा हिन्दू ब्राह्मणले नित्य पूजाआजा गर्ने र बौद्ध झुमाहरूले प्रसाद वितरण गर्ने चलन छ । तसर्थ मुक्तिनाथ हिन्दू र बौद्धमार्गी दुवैको आस्थाको केन्द्रविन्दु मानिन्छ । मुक्तिनाथ मन्दिरमा धातुको मुक्तिनाथको मूर्ति राखिएको छ । त्यसका साथै लक्ष्मी, सरस्वती र गरुडका मूर्तिहरू पनि छन् । शालिग्राम पाइने प्रसिद्ध स्थलमा मुक्तिनाथ रहेकाले हिन्दूहरूमा यसको विशेष महत्व छ । बौद्धमार्गीहरू यहंँको ज्वालालाई अवलोकितेश्वरको स्वरूप मान्दछन् ।
बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको दर्शन नगरी भगवान्को दर्शन यात्रा पुरा नहुने जनविस्वास भएकोले यो क्षेत्रको धार्मिक महत्व एकदम बढी रहेको छ । मुक्तिनाथ क्षेत्र अति प्राचीन भए पनि यसको ख्याति भने इसाको तेहौं–चौधौं शताब्दीदेखि मात्र बढ्न थालेको हो । यसका लागि वि सं १९५५ सालमा गुठी राखिएको प्रमाण पनि पाइएको छ ।
मुक्तिनाथ भेगमा जनै पूर्णिमा र कात्तिक पूर्णिमाका अवसरमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । तर स्वदेशी र विदेशी पर्यटक र तीर्थयात्रीहरू सालैभर यस क्षेत्रको भ्रमणमा आई नै रहन्छन् । यसले गर्दा मुक्तिनाथमा सधैं मेला लागिरहे जस्तो देखिने गर्दछ ।
शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७ मा प्रकाशित
नेकपानिकट पत्रकार पनि विभाजित, दुवै समूहले बोलाए राष्ट्रिय भेला
बल्खु पुलमा ट्यांकरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा महिलाको मृत्यु
आइसियुमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको मृत्युपछि डाक्टर कुटिए
पर्यटन क्षेत्रमा सुधार ल्याउन तत्काल ट्राभल ‘प्रोटोकल’ परिमार्जन आवश्यक, यस्ता छन् १२ बुँदे सुझाव
धम्क्याउँदै रकम असुली गर्ने ३ जना बागबजारबाट पक्राउ
पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य बढ्यो, कुनकाे मूल्य कति ?
प्रम ओलीलाई प्रचण्ड–माधवले साेधेकाे स्पष्टीकरण(पत्रसहित)
थाहा पाउनुहोस् रुद्राक्षको वैज्ञानिक फाइदा
मोटोपनले चिन्तित बनाएको छ ? पालना गर्नुहोस् यी ६ नियम
महाभारतका महत्त्वपूर्ण पाँच पात्र को को थिए ?